Diode Laser Bvudzi Kubvisa Fekitori | China Diode Laser Bvudzi Kubvisa Vagadziri uye Vatengesi
Anotakurika 3 wavelength diode laser bvudzi kubvisa epilasion chishandiso
diode laser bvudzi rekubvisa kurapwa richaitwa kana uchiparadza bvudzi follicle unit nekushandisa kupisa kwekushisa kwe laser inotsetsenura, nokudaro kuchitadzisa ramangwana bvudzi kumera zvakare ne follicle. Iyo yakawandisa sarudzo yekudonha kwenguva (20 kusvika 1000ms) ye755nm 808nm 1064nm diode laser system inogona kuburitsa kupisa kwemafuta mune bvudzi matrix maseru maseru uye kuve nechokwadi chekuparadzwa kwe follicle.
Kuitira kudzikisira kusanzwisisika kwekukanganiswa kwemafuta kumatunhu akakomberedza, inovhenekera ganda-kutonhora sisitimu (yesafiri yekubata kutonhodza muromo) yaishandiswa kutonhora ganda pamberi, panguva uye mushure mekurapa kosi yese. Naizvozvo, 755nm 808nm 1064nm diode laser yekubvisa bvudzi muchina unoshanda zvakanyanya kurapa ganda rakasviba.
FDA uye TUV Chiremba CE yakatendera 3 wavelength diode laser
755NM WAVELENGTH: Iyo 755nm wavelength inopa kuwedzera simba kwesimba nemelanin chromophore, ichiita kuti ive yakanaka kune yakajeka-yakajeka uye yakanaka bvudzi. Iine kupindira kwepamusoro, iyo 755nm wavelength inovavarira iyo Bulge yeiyo follicle yebvudzi uye inonyanya kushanda kune epamusoro-soro rakapetwa bvudzi munzvimbo dzakadai kunge tsiye uye muromo wepamusoro.
808NM WAVELENGTH: Iyo yakasarudzika wavelength mune laser bvudzi kubviswa, iyo 808nm wavelength, inopa yakadzika kupinda mukati mebvudzi follicle ine yakakwira avhareji simba, yakakwira kudzokorora chiyero uye yakakura 2cm nzvimbo saizi yekurapa nekukurumidza Iyo 808nm ine mwero we melanin yekumwa mwero ichiita kuti ive yakachengeteka kune ESE mhando dzeganda. Iyo yakadzika yekupinda kugona inonongedza iyo Bulge uye Girobhu rebvudzi follicle nepo zvine mwero kudzika kwenyama kupinda mukati kunoita kuti ive yakanaka yekurapa maoko, makumbo, matama uye ndebvu.
1064NM WAVELENGTH: 1064nm wavelength inoratidzirwa nekuderera kwemelanin absorption, ichiita iyo mhinduro yakatarisana yemhando dzakasviba dzeganda. Panguva imwecheteyo, iyo 1064nm inopa kudzika kwakadzika kweiyo bvudzi follicle, ichiibvumira kunongedza iyo Bulb nePapilla, pamwe nekurapa zvakadzika zvakadzika midzi munzvimbo dzakaita semusoro, makomba emaoko nenzvimbo dzepashiki. Nekukwirisa kwemvura kwakakwirira kunogadzira tembiricha yakakwira, kuiswa kweiyo 1064nm wavelength kunowedzera hunyanzvi hwehutachiona hwehutachiona hwese hwekubvisa bvudzi.
3 wavelength yakapetwa kabati dhayeti laser bvudzi kubvisa mudziyo
Iyo 755nm 808nm uye 1064nm diode laser yekubvisa bvudzi muchina unogadzirwa zvinoenderana neyakaitika mamiriro eiyo laser bvudzi
kubvisa musika. Inoshandisa yakasarudzika 808nm / 755nm / 1064nm wavelength kuti ipinde paganda kune rebvudzi follicle.
Zvinoenderana nesarudzo yekusarudza yekumwa, iyo laser simba iri
inonwiwa neiyo nhema pigment, uye ipapo bvudzi rinorasikirwa nekwaniso yekumutsiridza. Munguva yekurapa maitiro, yakasarudzika sapphire inotonhora sisitimu inogona kunyatsoita
chengetedza Epidermis kubva mukutsva, kuwana isingarwadzi, inokurumidza, uye yekusingaperi bvudzi kubvisa.
755 nm yeganda jena (yakanaka, kubvisa bvudzi regoridhe);
808 nm yeyero isina kwayakarerekera ganda (kubviswa kwebvudzi shava);
1064 nm yeganda dema (kubvisa bvudzi dema)
980nm vascular kubviswa tsvuku tsinga kubvisa diode laser mudziyo
Coolplas Fat Inotonhora Mudziyo iganda kutonhora system, iyo inoshandisa yakaderera tembiricha kupaza mafuta maseru. Coolplas Fat Inotonhora Mudziyo inogona kunyatsotakura simba rakagwamba nechando kune yakatarwa de-fatting chinzvimbo kuburikidza neasina-kuvhiringidza chando chesimba kubviswa michina.
Vatengi vane kunzwa kwekutonhora uye kugadzikana panguva yekurapa. Iyo yese yekurapa maitiro yakachengeteka kwazvo, isingarwadzi, isinga pindise, isiri yekuvhiya, isina-tsono, isina kutsemurwa, uye hapana nguva yekudzoreredza.
Iwo maseru emafuta anonyanya kutapurwa nemhedzisiro yechando, kusiyana nemamwe marudzi emaseru. Ipo maseru emafuta achigwamba, ganda uye zvimwe zvivakwa zvinoregererwa mukukuvara.